Uyazi ukuthi Imbi Kangakanani indlu yangasese
Ikhaya / Blog / Uyazi ukuthi Iyimbi Kangakanani Indlu Yangasese "Inuka kabi"? Thola Umthombo Ofanele Ukuyilungisa!
Uyazi ukuthi Iyimbi Kangakanani Indlu Yangasese "Inuka kabi"? Thola Umthombo Ofanele Ukuyilungisa!
2020 / 10 / 22 UkwahlukanisaBlog 1203 0
Uyazi ukuthi kunuka kabi kangakanani iphunga lokugezela? Ngokwenhlolovo, ukunuka kwendlu yangasese nephunga kungenzeka kudale isifuba somoya, i-bronchitis, ukuqubuka, nesifo senhliziyo nezinye izifo ezinkulu.
Okubi kakhulu ukuthi abantu bachitha okungenani iminyaka emihlanu yezimpilo zabo endlini yangasese, besebenzisa indlu yangasese ngaphezu kwemizuzu engu-15 ngosuku, cishe amahora amabili ngeviki, okulingana neminyaka emihlanu yezimpilo zabo zizungezwe “amagesi anobuthi”, cabanga ngakho konke okubi!
Kunemibono emine emikhulu eyiphutha Mayelana Nokususwa Kwama-Bathroom Deodorization
Ukwehlukaniswa kwendabuko kwendlu yokugezela kukhona ukungaqondani okukhulu okukhulu, ake sibheke.
Inganekwane # 1.
Awukho Umthelela Kwezempilo Yomuntu
Indle ekhishwe ngumuntu ikakhulu iqukethe i-ammonia, i-hydrogen sulfide, i-uric acid namanye amagesi ayingozi, ikakhulukazi i-hydrogen sulfide, ukuphefumula isikhathi eside kuzobangela ukuwohloka kokuzivikela komzimba komuntu, kuvuse umuzwa womuntu wephunga nezitho ezibonakalayo, kulula ukwenza isitho singaphenduli, ndikindiki, ikakhulukazi kwabadala, abesifazane abakhulelwe, izingane zilimala kakhulu.
Imvamisa I-Exhaust Fan
Ikhuluma Ngephunga Nokungcola Kwamagciwane
Umshini wokukhipha umoya ungadlala indima ekushintsheni umoya wasendlini yangasese, kepha ngenxa yokuthi ifeni yokukhipha iphezulu, izinto eziningi ezisindayo eziyingozi nezinhlayiya ezinobuthi azikwazi ukukhishwa ngale ndlela: amabhaktheriya ngokuvamile axhumene nezindonga, amathawula nezinwele ibhulashi nezinye izinto, akulula ukukhipha nge-fan yokukhipha ukuphuma.
Kuqeda iphunga lokugeza.
Ama-aromatics nama-fresheners aklanyelwe ukumboza iphunga elikhethekile ngokukhipha iphunga, futhi awakwazi ukusabela ngamagesi abangela iphunga elikhethekile, njenge-ammonia ne-hydrogen sulfide, futhi awakwazi ukubola noma asuse amagesi anjalo ayingozi.
Ngaphezu kwalokho, ama-aromatics amaningi aqukethe indandatho ye-benzene, i-aldehydes nezinye izinto, ukusetshenziswa kwesikhathi eside kungenzeka kubangele ubuthi obungapheli, futhi kuholele nakumdlavuza.
Ukuhamba kwesisu okunukayo.
Ukuqhuma Okumbalwa Okuzokwenza.
Ukuzikhulula, sizwa iphunga lendle ekhishwe lapho iphunga seligcwele yonke indawo yangasese futhi lasatshalaliswa endlini yokugezela, uma lesi yisikhathi sokugeleza, isikhathi lapho isiphepho sizokhipha umgodi wendlu yangasese wegesi enuka kabi nezinhlobo ezahlukahlukene zamagciwane indlu yangasese futhi ngqo emgudwini wokuphefumula womuntu, ocasula izinzwa, kungaholela kalula ezifweni.
Ngabe Iphunga Langasese Livela Kanjani Futhi Ungalixazulula Kanjani?
1, Iphunga Umthombo:
Amanzi Amanzi Amanzi Phansi Amapayipi
Ukuxhunyaniswa kuyipayipi lokukhipha amanzi, elisebenza futhi njengesithiyo ekubhekaneni nephunga nezinambuzane ezincane ezindizayo. Kulezi zinsuku, kune-U-type no-T-type floor drain emakethe. Idreyini yokukhipha u-u ihlukaniswe ngamapayipi angajulile esitezi samanzi kanye nomsele wamanzi wokujula wamanzi ajulile ngokuya ngobude bendawo yokugcina amanzi. Lapho amanzi asendaweni okugcinwa kuyo ehwamuka futhi omile, iphunga ledreyini lizovela.
Lapho amanzi edonsa, amandla adonsela phansi azophoqa ukuthi uphawu luphuke, futhi amanzi azobuyela esimweni sawo sokuqala ngemuva kokudubula, futhi ukwakheka kukazibuthe kuzoyibamba iqine. Mayelana nokuqina komoya: I-T-drain inamandla kune-U-drain, uma idreyini yaphansi inephunga elibi, into yokuqala okufanele ucatshangelwe ukuthi i-U-drain iwakhiphile amanzi, futhi udinga ukuthela amanzi kuwo kuphela ukuyenza ingangeni emoyeni.
(1) Okunye okufanele kuguqulwe, uma udaka lwamanzi luphansi ngama-50mm, noma uphawu lompayipi phansi lungaqinile, noma lonakele, esikhundleni salo kufakwe idreyini enhle yensimbi engagqwali yomkhiqizo.
(2) Okwesibili, yivale, uma kukhona igebe phakathi kophawu lwamanzi nesitsha, dlala ingilazi yeglu ukuze uyivale.
(3) Ukubulala amagciwane, uthele isibulala-magciwane samakhemikhali kudreyini phansi ukuncibilikisa izinsalela ezinjengezinwele zokugeza eshaweni.
(4) Ukugeleza, okuvame ukuba nebhakede elincane lamanzi, ukugeleza kudreyini yaphansi, okusele edreyini kuyosuswa, futhi kuqinisekiswe ukuthi amanzi avala amanzi.
(5) Hlola ikepisi lomoya lepayipi lamanzi ophahleni ukubona ukuthi livinjwe yini yimfucumfucu, futhi uma kunjalo, lihlanze.
2, Imithombo Yokuphunga:
Geza Umsele Wamanzi
(1) Ipayipi lokukhipha iDemo elifushane lifakwa ngqo kudoti ongaphansi futhi i-interface ayivalwanga, okwenza ipayipi lokukhipha amanzi libuyele ekunambithekeni.
(2) Akukho bhendi yokugcina amanzi kubhavu wokugeza ophansi wokukhipha ipayipi, okuholela ekubuyisweni kwephunga.
(3) Ukugeza izinwele nezinye izinsalela kukhona odongeni lwepayipi eduze nendawo yokugcina amanzi, iyawohloka ngemuva kwesikhathi eside, ukwakheka kwephunga, okuholele ekubuyeni kwephunga.
(1) Faka ipayipi lokukhipha umcengezi wokugeza emfuleni esihlangwini sepayipi lamanzi ukuze wenze uphawu lwenjoloba futhi uvimbe isiteshi esinephunga elibuyayo.
(2) njengesitsha sokugezela ngaphansi kwepayipi ayigcinwanga ukugoba amanzi, kungathathelwa indawo ipayipi kanye nekhoyili, ukwakheka kokugoba kwamanzi, ukuvimba isiteshi sephunga lokubuyela.
(3) ukuvame ukuhlanza ubuso bezinwele nezinye izinsalela lapho ugeza, ungavumeli ukuthi ihlale eduze nendawo yokubeka amanzi odongeni lwepayipi.
3, Umthombo Wephunga: Indlu yangasese Seal (Flange) yangasese kanye nokuxhuma kwepayipi lendle, kukhona uphawu, olwaziwa nangokuthi i-flange. Amaphunga Amaningi Okugeza, Awafakiwe Ngenxa Yesigxivizo Esibangelwe.
(1) Susa ithoyilethi futhi uphinde ufake uphawu.
(2) Uma amathayela aphansi azungeze indlu yangasese engenalutho, lungisa kuqala amathayili ayize, bese ulungisa ukuxhumana okukhona phakathi kwendlu yangasese namathayili aphansi.
(3) Ngemuva kwendlu yangasese, vala ngokushesha ikhava yangasese.
(4) imvamisa isebenzisa amanzi ukugeza indlu yangasese, ukuze ukugoba kwamanzi kungagcinwa emanzini afile, amanzi onakalisiwe.
(5) Sebenzisa njalo i-ejenti yokuhlanza yamakhemikhali (engeyona i-asidi) ukuhlanza indlu yangasese.
4, Iphunga Imithombo.
Izinwele nezinye izinsalela ziyanuka Shower izinwele zokugeza nezinye izinsalela, ezigeleza zingene ngepayipi lokukhipha amanzi lokukhipha phansi, izinsalela zesikhathi eside odongeni lomsele, ukuwohloka nokunuka, okuholela ekubuyeni kwephunga.
(1) Ukuhlanzwa njalo kwezinsalela zamakamelo okugeza.
(2) Khipha amagciwane kaningi ukuze ubulale amagciwane okonakala.
Edlule :: Ukulungiswa Kwama-Mirror Okugeza, abantu abangu-99% Bazoyibheka Le Mininingwane Olandelayo: Izincomo ezingaphezu kuka-10,000 Kumklamo Wendlu yangasese, Iqoqo eliphakanyisiwe!
Inselele, Abaklami Banikele Ngale Midwebo Emisha Yomnyango Wamasango
2021 / 06 / 08 895
220㎡ Phansi Kwegumbi Lezindlu Zokulala Ezihlanu, Isitayela Sesimanje | Umklamo we-Hongfu Gauge
2021 / 05 / 28 1135
Umhlobiso Wendlu yangasese Ye-16 "Imininingwane KaNkulunkulu", Yenza Okufanele, ...
2021 / 04 / 22 1789
Owokuqala Umhlaba! Ibhavu Lokuhlala Eliphephile Futhi Elisebenzisekayo, Ukuze “...
2021 / 04 / 22 1633
Lezi Zindlu Zokugeza Nazo Zibaluleke Kakhulu, Usuke Wazibona Zonke?
2021 / 04 / 21 1310
2021 / 04 / 12 1315